सावधान ! मिठो भात भनेर हामीले विष खाइरहेका छाैं - तितोपाटी
सावधान ! मिठो भात भनेर हामीले विष खाइरहेका छाैं
तितोपाटी – भात भनेपछि नेपाली हुरुक्कै हुन्छन् । कतिपयलाई एक छाक भात नभई हुँदै हुँदैन, दैनिक कम्तिमा एक पटक भात खानै पर्छ । हामी नेपाली त पोलिस लगाएर टिलिक्क टल्केको चामलको भात खान रुचाउँछौं । पोलिस नगरेको चामल (ब्राउन राइस) खाने त नगन्य होलान् वा छैनन् भन्दा पनि हुन्छ । यद्यपी नेपाली खाना अर्थात दात, भात, साग, अचार स्वास्थ्यका लागि उत्कृष्ट मानिए पनि सेतो चामलको भात विष समान हुने चिकित्सक बताउँछन् । के हामीले हरेक दिन खाँदै आएको सेतो चामलको भात स्वास्थ्यका लागि उपयुक्त छ ? यसबारे पत्रकार एस राज उपाध्यायले अर्थो न्युरो हेल्थ केयर, लगनखेलका प्राकृतिक तथा क्रोनिक ब्याक पेन एक्सपर्ट डा. सुनिल पौडेलसँग गरिएको कुराकानी ।
डा. सुनिल पौडेल संस्थापक निर्देशक, अर्थोन्युरो हेल्थकेयर, लाई प्रश्न सोध्न हटलाइन ९७४१३३३००९ वा hamrodoctor@gmail.com
-प्रशासन डट कम बाट
July 1, 2018 11:48 pm | अन्तर्वार्ता, मुख्य खबर, स्वास्थ्य